Kuthiwani uma router Wi-Fi akaboni imodemu USB?
Ngokuba izihloko eziningi kwabhalwa ngale ndaba amanethiwekhi wireless, ukucushwa kwe routers, nokunye .. Kodwa, ngasizathu simbe, nakani kancane ukuba routers ukuthi bangasebenza USB modems. Siye kakade ebhaliwe mayelana nendlela ukumisa ezimbili zalezi routers: TP-Link TL-MR3220 futhi Asus RT-N13U . Idivayisi Good, nakuba TP-Link TL-MR3220 ngandlela-thile ngokushesha yaphuka wayenqabile ukubonana modem. Yilokho mina nje I wabhala . Mhlawumbe abanye Awushadile. Futhi inqubo lokubeka, ne TL-MR3220 waba nezinkinga ezingaphezu kuka Asus RT-N13U, owenza ngokushesha emva uxhumano.
Kodwa kulesi sihloko Ngithanda ukutshela mayelana udaba popular ukuthi kuphakama ngokuvamile inqubo ukumisa pair nge modem USB. On the inkinga lapho router enqaba ukusebenza nge modem USB. Akaliboni it, noma ungafuni ukuxhuma kwi-Inthanethi. Inkinga ngempela, wabhekana lapho nizibekela TP-Link TL-MR3220.
Routers ukuthi bangasebenza USB modems, umqondo omuhle kakhulu. Phela, uma ungeke ukubamba Internet ikhebula, kodwa kuphela wireless 3G/4G (isib, in the emzaneni), futhi ufuna ukuba uphisane Wi-Fi, kungcono nje kukho enkulu. Kuyinto edabukisayo ukuthi okwamanje lezi routers ababaningi kakhulu emakethe, onobuhle eziningana ezivela nomakhi ngamunye. Kodwa kungani ukhetha ukudla.
Ngakho, lapho une 3G/4G Internet, niyazi ukuthi ungakwazi ukusabalalisa ku-inthanethi Wi-Fi. Sathenga router, Yebo, kanye USB modems, waliyisa konke ekhaya, ukumisa, futhi lutho usebenza. Kungani lokho? Cishe ngoba router yakho ayifuni "ukwenza abangane" kanye modem yakho. Manje sizama ukuqonda konke ukuze.
By the way, uma ungenawo ukuthenga lutho, ngikweluleka ukuba ufunde lesi sihloko. Kuyo, ngabhala kanjani ukukhetha router ilungelo imodemu.
Tips for ekuxazululeni izinkinga
1. As I okubhale ngenhla, inkinga Uvame router akuvumelani nge modem. Kusukela model ngamunye router has a uhlu modems asekelwa kanye nabahlinzeki. Lolu luhla kumele kudingeke ukuba bafunde ukuthenga router. Futhi kangcono ngisho ukuthenga router, kanye imodemu. Thola lezi zinhlu zingasisiza on the website esemthethweni abakhiqizi routers. Ngokwesibonelo, TP-Link izibonelo zabo http://www.tp-linkru.com/products/?categoryid=202&mode=complist . Sidinga ukuthi ukuba modem yakho kwaba ohlwini. Ama-modem babuka sticker modem. Uma ungasitholi eyikhebula yakho ohlwini, indlela elula ukudlulisela router emuva esitolo futhi uthathe ezifanele. Noma ukudlala firmware (cishe ulahlekelwe iwaranti), hhayi lokuthi aphumelele.
2. Uma konke kuhamba kahle, imodemu ohlwini, kodwa akusebenzi , ukuqala, wenze kabusha . Futhi zama ulungise lonke futhi. Kuyinto efiselekayo for the manual umsebenzisi.
3. Uma imodemu ubona router, kodwa akusho ukusungula uxhumano kwi-Inthanethi, hlola ukuthi owabeke umhlinzeki izilungiselelo, kanye qiniseka ukwenza isiqiniseko ukuthi imodemu kuyinto endaweni Ukusabalala. Okungukuthi, imodemu kugcina inethiwekhi uzinze. Uma kungekho signal, kuyoba Yebo ngeke bakwazi ukuxhuma kwi-Inthanethi.
<> 4. Uma ukuxhuma imodemu ibe strip amandla, zama ukuxhuma ngaphandle kwalo ngqo.
5. Uma konke okunye zingaphumeleli, qiniseka zama ubuyekeze firmware router ukuba inguqulo yakamuva .
Ukushintsha kwesikhathi esinqunyiwe sokuba hlenga iphasiwedi screen | Encyclopedia of Windows
Microsoft imise usithumela Windows 10 Hambayo ukwakha 10586,29
Indlela alungise amaphutha « Ifayela boot yokulungisa idatha sishoda abanye ulwazi oludingekayo » ebhuthini Windows 8.x
Microsoft ilungisa Outlook. com:imfuhlumfuhlu, izingqikithi ezintsha, nokuningi